IVeki yokuQatshelwa kwezoKhenketho ekuGxilwe kuKhenketho kuHlumo oluQuka wonke
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IVeki yokuQatshelwa kwezoKhenketho ekuGxilwe kuKhenketho kuHlumo oluQuka wonke
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
IJamaica ibhiyozela uSuku loKhenketho lweHlabathi
ISebe lezoKhenketho laseJamaica, imibutho yoluntu, kunye namaqabane ezokhenketho, kubandakanya neJamaica Hotel kunye noMbutho wabakhenkethi (JHTA), bazakube bebalaselisa indima ebalulekileyo edlalwa kukhenketho ekukhuthazeni ukubandakanywa kunye nokukhula koqoqosho njengoko bejonga iVeki yoKwazisa ngoKhenketho (TAW) 2021.
Umsitho walo nyaka uza kuba ngumbhiyozo wamandla okhenketho wokuqhuba uphuhliso olubandakanya wonke umntu ngelixa uvelisa amathuba kwizigidi kwihlabathi jikelele.
Kule veki iphela, uMphathiswa uzakusebenzisa ushicilelo kunye nemithombo yeendaba ukubalaselisa amanyathelo abo.
Eminye imisebenzi ibandakanya umboniso wangoSeptemba 27, ikonsathi ebonakalayo ngo-Okthobha u-1, kunye nokhuphiswano lwevidiyo yolutsha.
Isikhumbuzo salo nyaka siza kubandakanya uSuku lwezoKhenketho lweHlabathi, oluphawulwa rhoqo ngonyaka nge-27 kaSeptemba nguMbutho wezoKhenketho weZizwe eziManyeneyo (i-UNWTO) kunye neendawo kwihlabathi liphela. Olu suku luza kuqatshelwa phantsi komxholo othi "uKhenketho loHlumo oluBandakanyayo," noluza kusebenza njengomxholo we TAW 2021, omiselwe ukuba uqalise ukusukela nge-26 kaSeptemba ukuya kwi-2 ka-Okthobha.
Iya kuba ngumbhiyozo wamandla okhenketho wokuqhuba uphuhliso olubandakanya wonke umntu ngelixa ivelisa amathuba kwizigidi ezininzi kwihlabathi liphela.
Ngokwe-UNWTO: “Eli lithuba lokujonga ngaphaya kweenkcukacha-manani zokhenketho kwaye samkele ukuba, emva kwenani ngalinye, kukho umntu… Ukubhiyozela amandla okhenketho awodwa okuqinisekisa ukuba akukho mntu ushiyekileyo njengoko umhlaba uqala ukuvuleka kwaye ujonge kwikamva. ”
Le veki izakuqala ngenkonzo yecawe ngeCawa, ngeyoMsintsi 26. Kule veki iphela, i-Ofisi yoMphathiswa namaqumrhu oluntu aza kusebenzisa imithombo yeendaba eprintayo kunye ne-elektroniki ukuqaqambisa amanyathelo abo akhuthaza ukukhula okubandakanya. Eminye imisebenzi ibandakanya umboniso wangoSeptemba 27, ikonsathi ebonakalayo ngo-Okthobha u-1, kunye nokhuphiswano lwevidiyo yolutsha.
Umphathiswa Wezokhenketho Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett uphawula ukubaluleka komxholo, kwaye wabelana ukuba injongo yoMphathiswa wakhe, "ibisoloko ikukudala imveliso yezokhenketho apho izibonelelo ezinkulu zisasazwa ngokulinganayo kuluntu lonke." Uye wagxininisa ukuba: "Ukhenketho luxhomekeke kumfama, kumthengisi wobugcisa, kwezolonwabo nakwezombane ngezothutho njengoko kunjalo malunga nehotele, indawo yokutyela kunye nomtsalane."
“Ezokhenketho lelinye lawona mashishini makhulu kwaye akhula ngokukhawuleza emhlabeni kwaye ingowona mthombo wengeniso kumazwe amaninzi. EJamaica, ukhenketho sisonka sethu kunye nebhotolo. Ezokhenketho ziyinjini yoqoqosho lwethu. Idala imisebenzi, itsale utyalomali lwangaphandle, iqhuba uphuhliso lwezixhobo ezibalulekileyo, kwaye ikhuthaza urhwebo kumacandelo amaninzi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikhuthaza ukukhula okubandakanya uqoqosho kunye nokuhamba kwabantu, ”wongeze watsho.
Nangona ukukhula kwecandelo kuye kwanefuthe elibonakalayo kwindyikityha ye-COVID-19, ethe yaphazamiseka imisebenzi yoqoqosho lwehlabathi, U-Bartlett ugxininise ukuba ukuzinza kunye nokubandakanya kubalulekile kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
“Isakhelo sesilivere kukuba ingxaki ye-COVID-19 isinike ithuba lokuba sicinge kwakhona kwaye sakhe eli shishini lomeleleyo ukuze sikwazi ukufezekisa esi sigunyaziso. Ukuzinza kunye nokubandakanya konke kuyahambelana nenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ke ngoko, njengoko siwasebenzisa amathuba asengxakini, sisebenzisa iindlela zobuchule zokwakha imveliso ekhuselekileyo, enobulungisa nevelisa amathuba ezoqoqosho kubantu baseJamaica abaqhelekileyo, utshilo.